gundhigga bogga tooska ah ee diyaaradda wuxuu muujinayaa f22 sida tan loo baddali karo tusaale ahaan: 737.
gundhigga bogga tooska ah ee diyaaradda wuxuu muujinayaa f22 sida tan loo baddali karo tusaale ahaan: 737. 2 bilood 1 toddobaad ka hor #1798
Haye asxaabta. bogga hore ee caadiga ah wax lagama beddeli karaa marka la buuxiyo p3pdv3. nooca diyaaradda iyo goobta laga raaco garoonka diyaaradaha ee caadiga ah.Tanks Jim Beale
gundhigga bogga tooska ah ee diyaaradda wuxuu muujinayaa f22 sida tan loo baddali karo tusaale ahaan: 737. 2 bilood 1 toddobaad ka hor #1803
Markaad xulato diyaaradda, dooro calaamadda asalka.
P3D had iyo jeer waxay ku bilaaban doontaa diyaaradda / seenyadaas
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Yacquub Beale
gundhigga bogga tooska ah ee diyaaradda wuxuu muujinayaa f22 sida tan loo baddali karo tusaale ahaan: 737. Bilood 2 6 maalmood ka hor #1805
Ka bilow sim, dooro diyaaradda, ka dib madaarka iyo baarkinka / waddo-orodka ka dibna billow duullimaadyada
Markaad barafka gasho ka dooro SCENARIO ikhtiyaarka howsha kore ee bidixda.
Guji xulashada SAVE oo dooro DEFAULT, ka dibna dhagsii kaydi. Hadda waxaad si otomaatig ah ugu jiri doontaa diyaaraddaas bilowga barnaamijka.
Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa tan inaad ku bilowdo 'qabow iyo mugdi' adigoo deminaya dhammaan nidaamyada kahor xulashada xulashada SAVE. Markaa waxaad ku bilaabi doontaa dhammaan nidaamyada DAMBADKA HALKAN.
gundhigga bogga tooska ah ee diyaaradda wuxuu muujinayaa f22 sida tan loo baddali karo tusaale ahaan: 737. Bilood 2 5 maalmood ka hor #1806
Waad ku mahadsantahay Guys jawaabta ay ka bixinayaan arrintan, waxaanan tijaabin doonaa iyaga oo aan kuu oggolaan doonin sida ay u dhacday. Cheers Jim